एमसीसी परियोजना नआए के हुन्छ प्रसारण लाइनको अवस्था ? | Ratopati
एमसीसी प्रोजेक्ट नेपाल ल्याउन कुनकुन नेताले केके गरे ?
personमदन ढुङ्गाना exploreकाठमाडौं access_timeमाघ ८, २०७६ chat_bubble_outline2
किनभने नेपालमा आगामी ५ वर्षमा उत्पादन हुने बिजुली र खपत वा ग्रिडमा जोड्नका लागि पनि यो प्रसारण लाइन बनाउनुको विकल्प छैन । फरक यति हो कि यो प्रसारण लाइन नेपाल सरकार वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खर्चमा बनाउने कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहयोग लिएर बनाउने ।
अहिले नेपालमा विद्युत्को उत्पादन र मागको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यही आधारमा यसको नयाँ संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापन पहिलो चुनौती रहेको छ ।
यो प्रसारण लाइन र सबस्टेसन कसरी र किन बन्दैछ ?
अहिले ज्यादै पेचिलो बन्दै गएको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसीको विषयलाई पहिले गम्भीर ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ । ‘रणनीति’मा के छ भन्ने कुरा फरक विषय होलन् तर सम्झौतापत्रमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ र अहिले गर्ने भनिएको कुरा के हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल सरकारकै योजना थियो यो प्रसारण लाइन
अहिले बाहिर चर्चा गरिएजस्तो अमेरिकी सेना नेपाल ल्याउनका लागि अमेरिकी डिजाइनमा तयार पारिएको कार्यक्रम र रणनीति होइन, एमसीसी प्रोजेक्ट ।
एमसीसी ल्याउन कुनकुन नेताले केके गरे ?
एमसीसीको विषयमा सरकार स्पस्ट छ, संसदबाट पास हुन्छः मन्त्री ज्ञवाली
त्यसपछि २०७४ भदौ १९ गते एमसीसीसँग अनुदान सम्झौता गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गर्‍यो ।
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरी अनुदान सहायता लिने सम्झौता गरे । त्यसपछि यो चरणले केही तीव्रता पायो ।
कति खर्चमा कसरी बन्दैछ प्रसारण लाइन ?
एमसीसीको सहयोगमा बन्न लागेको ३ सय १२ किलोमिटर लामो ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको सुरुवात नुवाकोटको रातमाटे भन्ने स्थानबाट सुरु हुन्छ ।
नुवाकोटको रातमाटेमा ३ सय ८५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने छ र त्यहाँ करिब १ हजार ३ सय मेगावाट क्षमताको ट्रान्सफर्मर राखिने छ । त्यहाँ बन्ने सबस्टेसनबाट काठमाडौँलाई आवश्यक विद्युत् काठमाडौँको लप्सीफेदीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमा ल्याइने छ । त्यो प्रसारण लाइन काठमाडौँमा आवश्यक विद्युत्को आपूर्तिका लागि हो ।
रातमाटेबाटै अर्को प्रसारण मकवानपुरको हेटौँडातर्फ जाने छ । उक्त प्रसारण लाइन हेटौँडा र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउनका लागि हो र हेटौँडामा सबस्टेसनसमेत बनाइने छ । त्यसैगरी रातमाटेबाटै अर्को लाइन गल्छी, बेनीघाट हुँदै तनहुँको दमौलीमा पुग्नेछ । त्यहाँ पनि करिब १ हजार मेगावाट क्षमताको सबस्टेसन बनाइनेछ र दमौली तथा पोखरा लगायत आसपासका क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् वितरण गरी बाँकी रहेमा पाल्पा हुँदै सुनवल पुग्नेछ । नवलपरासीको रामग्राममा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमै एमसीसीले थप सबस्टेसन बनाउनेछ । त्यहाँबाट पनि करिब २३ किलोमिटर नेपाल भारतको सिमानासम्म एमसीसीले प्रसारण लाइन बनाउनेछ ।
एमसीसीले बनाउने प्रसारण लाइन ४ सय केभीको हुनेछ जहाँ एउटा लठ्ठामा ४ वटा तार र एउटा टावरमा ३ थान र अर्को टावरमा ३ थान गरी ६ थान तार हुनेछ ।
यो प्रसारण लाइनले १० वटा जिल्लालाई छुनेछ भने ३० वटा गाउँपालिका र ८१ वटा सामुदायिक वनलाई छुनेछ । यो प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन बनाउनका लागि यी क्षेत्रमा १२ हजार ५ सय रोपनी जनताको जग्गा पर्नेछ ।
यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ८ सय ४७ वटा टावर बन्नेछन् । यो प्रसारण लाइन निर्माण तथा सबस्टेसन बनाउनका लागि ४० करोड डलर अर्थात् करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ करोड डलर अर्थात् करिब १४ अर्ब रुपैयाँ भने जग्गा अधिग्रहण लगायतका अन्य कामका लागि खर्च हुनेछ ।
नुवाकोटको रातमाटेमा बन्ने सबस्टेसनमा त्रिशूली, सान्जेन, चिलिमे, रसुवागढी लगायतबाट विद्युत् ल्याएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिनेछ । त्यसैगरी खिम्तीबाट काठमाडौँ ल्याउने विद्युत्को लाइन पनि यदि काठमाडौँमा बढी भएको अवस्थामा लप्सीफेदी हुँदै रातमाटे लैजान सकिनेछ ।
त्यसैगरी हेटौँडामा बन्ने सबस्टेसनले इनरुवासम्म बन्दै गरेको ग्रिडमा जोड्न सकिने छ । यसले हेटौँडाबाट अन्य क्षेत्रमा लैजाने विद्युत्का लागि सहजी करण गर्नेछ ।
दमौलीमा बन्ने अर्को सबस्टेसनले मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी र भविष्यमा आउने बूढीगण्डकी समेतको विद्युत्लाई जोड्न सकिने छ । यसकारण विद्युतीकरण र विद्युती खरिद तथा बिक्रीका लागि पनि यो प्रसारण लाइन अति आवश्यक नै छ ।
यदि सन् २०२५ सम्ममा यो र यस्तै प्रसारण लाइन नबन्ने हो भने नेपालमा उत्पादित विद्युत् प्रसारण लाइनको अभावकै कारण प्रयोगविहीन हुनसक्ने अवस्था आउनेछ ।
प्राधिकरण भन्छ : प्रसारण लाइन बनाउनुको विकल्प छैन
एमसीसी सम्झौता ३ वर्षअघि काँग्रेस र तत्कालीन माओवादीको सरकारले गरेको हो : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
‘एमसीसी परियोजनाबाट लाभ लिन कुनै शंका गर्नु पर्दैन’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी यो प्रसारण लाइन बन्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता अधिकारीले यो प्रसारण लाइन नबने सन् २०२५ सम्ममा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ल्याएर जोड्न र प्रयोगमा ल्याउन नै कठिन हुने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘कसले दिएको सहयोग लिने वा नलिने निर्णय सरकारको हो । तर कुरा के हो भने हामीले पनि योजना बनाउँदा यो प्रसारण लाइन बन्छ र हामी कुन ठाउँबाट उत्पादिन विद्युत्लाई कसरी कुन ठाउँमा लगेर जोड्ने भनेर योजना बनाएका छौँ । हामीले बनाएको योजनामा यो प्रसारण लाइन एउटा मुख्य हिस्सा हो । त्यसकारण यो प्रसारण लाइन कुनै पनि हलातमा बनाउनुपर्छ ।’
एमसीसीको सहयोग आएन भने के हुन्छ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा अधिकारीले भने, ‘यो आयोजना सम्पन्न हुन सकेन भने देशलाई ठूलो क्षति हुन्छ । कसले सहयोग गर्ने र नगर्नेभन्दा पनि यो बनेन भने के हुन्छ भन्ने ठूलो कुरा हो । यो प्रसारण लाइन बनेन भने राष्ट्रिय स्तरमा विद्युत्को वितरणमा पनि यसले गम्भीर असर गर्नेछ । भारत वा बङ्गलादेशलाई बेच्ने भन्ने कुरापछिको विषय हो ।’
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार यदि एमसीसीले नेपालमा काम गरेन भने यस्तो आयोजना बनाउनका लागि प्राधिकरण वा सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग यति ठूलो बजेट पनि नभएकाले यस्तो आयोजना सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्न सक्नेछ ।
१ सय किलोमिटर सडक स्तर उन्नति हुनेछ
एमसीसीको यो कम्प्याक्ट आयोजनाले प्रसारण लाइन मात्रै निर्माण गर्ने छैन, १ सय किलोमिटर सडकको पनि स्तर उन्नति गर्नेछ । यो आयोजनाले कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म सडकको स्तरोन्नति पनि गर्नेछ । यो सडक स्तरोन्नति गर्नका लागि एमसीसीले झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।
के आयोजनामा अमेरिकी सैनिक आउन सक्छन् ?
#एमसीसी#Millennium Challenge Corporation
Jan. 22, 2020, 8:02 p.m. Amar singh pun
LEKHE ko jastae ho Bhane Theek xa tr Vigya (budhijivi) haru le pratham Aafno Desh hit Sochnu pàrxa
Jan. 22, 2020, 5:37 p.m. uttam
mcc vitrayako kamisan kasle khane .